Nzira yekufambisa sei mabhesiki akakosha muMicrosoft Word?
Yakatumirwa ne Tranquillus | May 2, 2020 | hofisi
Kune iro rishoma basa rekuita paIzwi zvinotora maawa matatu. Kugadzirira gwaro kana tafura, iwe haufanirwe kuverengerwa. Pasina pekunyoresa kana kubhadhara chero chinhu, zvese zvinoshanduka mune isingasviki awa. Wakatotora danho rekutanga. Iyo inoenderana nekunzwisisa kuti inguva yekuzvirovedza wega. Nheyo dzakakosha dzeMicrosoft Word dziri pamunwe wako .Zvino gara kumashure uye mutarise vhidhiyo yandinopa nokungwarira.
Nheyo dzakakosha dzekuziva muMicrosoft Word: nhanho 1
Kuti ushandise mazuva ose Shoko zvinobudirira. Iyo yekushoma yeiyo shoma ndeye kukwanisa kuzviwana iwe pachako mune software software. Iwe unozoerekana wave kugadzirwa kana iwe uchiziva izvo zvatiri kutaura nezvazvo kana tichitaura nezve ribhoni. Kunyangwe iwe uchizokwanisa kudzvanya pane yakagadzirirwa kana yekuongororwa tab, zvichienderana nesarudzo iwe zvauri kutsvaga! Ungada sei kutorwa zvakadzama nevako pamwe newe kana newako pane kugona kwako kugadzirira magwaro akareruka? Kana ruzivo rwako rwunogumira pakuvhura uye kuvhara faira.
Kuti utange iwe unofanirwa kudzidza :
Maitiro ekugadzira kana kusarudza gwaro template uye nekuachengeta
Fomati yako zvinyorwa: zvakashinga, italics, kuenderana, mabara uye zvimwe mhedzisiro mhedzisiro
Wobva wagona Ratidziro: mazita, kutaridzika kwechinyorwa kana peji, marama, indents pamwe nemiganhu.
Fambisa pakati pematinji zvichienderana nebasa rinofanira kuitwa
Uye kuti utore zita uye chengetedza faira rako kana wapedza.
VERENGA 10 pasina zvinodiwa software
Nheyo dzakakosha dzekuziva muMicrosoft Word: nhanho 2
Kana uchinge warangarira zvese zvakakosha kuti urege kuvhunduka kana uchinge waudzwa kuvhura Shoko. Iwe unogona kuda kuenda nekukurumidza, kunatsiridza hwakajeka hwemhando yezvinyorwa zvako. Isa mafoto kana shandisa zvirevo zvakafanotaurwa. Nezvishoma zvishoma zvinhu zvekuyeuka, iwe uchachengeta yakawanda nguva. Nekururamisa kunyora kwako nekukurumidza. Zvadaro nekudzokorora misoro on inoshuma, zvinyorwa, kana matafura iwe aungafanira kugadzirira.
Kuti upedze iwe unofanirwa kudzidza:
Kuiswa kwezvinhu zvakajairika, mapikicha, mifananidzo kana graphic tafura
Wobva washandisa keyboard mapfupi kukopa uye unama zvinyorwa
Enderera nekutsvaga nekutsiva mazwi
Zvakare zvekare, kushandisa iyo otomatiki spell yekuongorora
Enderera mberi nekuchinja misoro uye tsoka
Uye kupedzisa nekushandiswa kwemaitiro uye zvinyorwa
Yekutanga Izwi rekudzidzisa chii chichauya kwandiri?
Runyararo rwakakosha rwepfungwa kuti uite kuti unzwe wakasununguka pabasa rako. Kamwe kushanda paIzwi, iwe unozotorwa zvakasiyana nevaya vakakukomberedza. Kudzidzisa izwi kugadzirisa software chinhu chakakosha chinhu. Hafu yevanhu vanoshanda newe vanonetsekana nemidziyo yehofisi. Asi nekudzidzira kushoma uye kushivirira, chero munhu anogona kufadza vaaishanda navo nemhando dzakanaka. Kuonekwa kwezvinyorwa zvako kunopa iwe mufananidzo weiye ane ruzivo nyanzvi. Ndezvipi zviri nani pane kuverengerwa kune munhu asina simba iye asingazivewo kushandisa kwake khibhodi.
VERENGA Shoko Mazano Pakutanga Chikamu-Chinhu Chine Zvokudya Zvegoridhe
Nzira yekufambisa sei mabhesiki akakosha muMicrosoft Word? Chivabvu 2nd, 2020Tranquillus
pashureGadza bhokisi rako rebhokisi sebhokisi remumhanzi
zvinoteveraIyo Yakazara Rondedzero Yekhibhodi Pfupi pane Windows 10
Izvo zvakanakisisa paIndaneti zvishandiso zvekushandura rugwaro kana peji